misy fifidianana eto amin’ny firenena. Taorian’ny taona 2009 no tena hita ho saika tsy mitsahatra fa miteny foana sy mitanisa ireny tsy fahatomombanana ireny ireo fiarahamonim-pirenena. Nitsangana daholo ity karazana rafi-piarahamonim-pirenena ity ary tsy sasatry ny manao atrikasa sy fikaonan-doha ary mamoaka fehin-kevitra anaty boky be an-jatony pejy avy eo saingy hatreto aloha, tsy hita izay voka-tsoany tamin’izay fivoaran’ny tontolom-pifidianana eto amin’ny izay, indrindra moa, fa teo amin’ny lafiny fampandrosoana. Rahampitso izao dia hamoaka fehin-kevitra indray ny avy eo anivon’ny sampana fanaraha-maso ny fifidianana na Safidy saingy ny fanontaniana mipetraka ankehitriny kosa dia hoe hitondra inona indray re ? Moa va mba misy mihaino ihany ny fiarahamonim-pirenena eto Madagasikara sa tena miresaka amin’ny hazo sanatria ?